Nin dilay shan qof oo hal qoys ka wada tirsanaa - BBC News Somali
Nin dilay shan qof oo hal qoys ka wada tirsanaa
Haweeney ubax dhigeyso bannanka hore ee guriga dadka lagu laayey
Robert Harvey waxaa lagu soo eedeeyey inuu galbeedka Australisa uu ku dilay xaaskiisa, seddex carrur oo uu dhaly iyo ayeeydood.
Meeydadka Mara Lee Harvey oo 41 jir ah, mataano laba jirra ah oo lagu magcabo Alice iyo Beatrix, Charlote oo seddex jir iyo Beverley Quinn oo ah ayeeyda 73 jirka ah waxay booliska Australia Axaddi ay meydadkooda ka soo saareen guri ay qoyskaasi wada degganaayeen.
Antony Robert oo 24 jir ah waxaa maanta la soo taagay maxkamad iyada oo lagu soo eedeeyey dil uu u geystay shan qof oo hal qoys ka wada tirsanaa.
Dilka dadkaasina wuxuu u adeegsaday "middi iyo waxyaaba kale oo afleh".
Taliyaha booliska Galbeedka Australia Chris Dawson ayaa wuxuu sheegay in loo badinayo Marwo Harvey iyo carruurteeda iney ku dhinteen gurigooda oo ku yalla xaafadda Bedford.
Ayeeyda carrurta Quinn waxaa iyadu la dilay maalinta xigtay marka ay tagtay guriga carruurteeda lagu laayey.
Waxay booliska Australia Mr Harvey ku eedeeyeen inuu dhowr malmood uu guriga dadka uu ku laayey uu ku jiray meydadkana ay guriga dhex yaalleen, inta aan la keenin saldhigga booliska ee ku yaallo Pannawonica oo waqooyiga perth u jira 1430km (900 mile).
Booliska oo baarayo guriga uu dilka ka dhacay
Raisal wasaare ku xigeenka dalka Australia Roger Cook wuxuu sheegay "iney niyadda marwalba kala jiraan qoyskaa la laayey iyo eheladooda iyo asxabtoada xanuunka la dareemay, dhacdadan foosha xunna ay dowladdu si degdeg ah tallaabba uga qaadeyso "
Waxaanna codsanayaa ayuu yiri 'inuu qof walba uu carruurtiisa iyo xaaskiisa laabta geliyo' si aan u xusuusanno qoyskaasi sida naxariis darrada ah loo laayey'.
Dhacdadani waa tii seddexaad oo sanadkan gudahii dil wadareed looga geysto galbeedka Australia.
Australia oo soo afjartay duqeyntii cirka ee Ciraaq iyo Suuriya
Bishi July wiil 19 jir ah ayaa wuxuu Ellenbrook uu ku dilay laba carruur ah iyo hooyadood.
Laba bilood kaddib marki ay dhacadadasi dhacdayna 7 qof oo meyd ah ayaa laga helay dhulka miyiga ee Osmington oo 170km u jirta koonfurta Perth.
Tani 1996-kii waa dilkii ugu badnaa oo ka dhaca dalkaasi Australia.
14 Luulyo 2020